Maraykanka oo Duqayn uu Maanta ka fuliyay Somalia ku sheegay inay ku dileen 100 Alshabaab ah. – Hornafrik Media Network
In ka badan 100 Alshabaab ah ayaa lagu dilay Duqaymo Diyaaradeed oo Maanta ka dhacay meel ka xigta 125 KM dhinaca Waqooyi Galbeed Magaaladda Muqdisho, sida laga soo xigtay Pentagon-ka Maraykanka.
“waxaan mar kasta muhiimadda siinaa inaan culays saarno Shabakadaha Argagixisadda ah,” sidaasna waxaa yiri Samantha Reho oo ah Afhayeenka Africa Command.
Waaxda Difaaca Maraykanka waxaa hadda ka jooga Somalia 500 Shaqaale ah oo isugu jira Ciidan, Rayid, iyo Qandaraas Qaatayaal, taasoo ka dhigaysa in ka badan Labo Jibaar tiraddii Maraykanka ka joogtay Somalia Bishii March ee 2017 oo ahayd 200 Shaqaale ah.
Shaqaalahan Maraykanka ah waxay qayb ka yihiin Dadaaladda ay ku caawinayso Washington Howlgalka Midowga Afrika ee Somalia oo dagaal kula jira Alshabaab iyo ISIS, kuwaasoo lagu qiyaaso Maleeshiyaadkooda inay u dhaxeeyaan 3,000 illaa iyo 6,000 Maleeshiyaad Alshabaab ah iyo 250 ISIS ah.
Sannadkan oo kaliya waxay Pentagon-ku sameeyeen Somalia illaa iyo 29 Duqaymo Diyaaradeed ah, kuwaasoo 7 ka mida ay dhaceen intii u dhaxaysay 9 illaa iyo 14-ka Bisha November.
November 9, Maleeshiyaad badan ayaa lagu dilay duqayn ka dhacday 100 Mile meel Galbeed ka xigta Muqdisho.
November 10 Gobalka Shabeelaha Hoose, gaar ahaan meel 20 Mile Waqooyi ka xigta Muqdisho waxaa ka dhacay Duqayn lagu laayay Alshabaab.
November 11 meel u dhow Gaduud, oo qiyaastii 250 Mile Koonfur Galbeed ka xigta Muqdisho ayaa la duqeeyay.
November 12 waxaa jiray 2 Duqaymo oo kala duwan, kuwaasoo lala kala beegsaday Alshabaab iyo ISIS, Waxaana kan 1-aad uu ka dhacay Shabeelaha Hoose, halka kan xigana uu ka dhacay Puntland.
On November 13, waxaa duqayn kale laga fuliyay meel 250 Mile Koonfur Galbeed ka xigta Muqdisho, kadib markii ay Kooxdu ku hanjabeen inay beegsan doonaan Howlgalka ay Somalia horkacayso ee Dagaalka ka dhanka ah Argagixisadda.
November 14 duqayn ayaa lagu sameeyay saldhig ay Alshabaab ku lahaayeen meel 60 Mile Waqooyi Galbeed ka xigta Muqdisho.